Fake Serial လုံးဝ မဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Internet Download Manager V 6.18 Build9Final Full | ကိုနန္ဒ
Home » Computer Software , Computer Software နှင့် နည်းပညာ » Fake Serial လုံးဝ မဖြစ်တဲ့ နောက်ဆုံးထွက် Internet Download Manager V 6.18 Build9Final Full
Posted by Unknown Posted on 11:13 with2comments
အခု ဒီလမှ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Internet Download Manager V 6.18 Build9Final ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ 6.18 Build9Version က Fake Serial လုံးဝ မတတ်တော့ပါဘူး။ အာမခံပါတယ်။ အောက်မှာ Activated လုပ်နည်းရေးထားပေးပါမယ်။ အဲအတိုင်းသာ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Fake Serial လုံးဝမတတ်ပါဘူး။
Internet Download Manager IDM 6.18 Build9Final ကို Install လုပ်ပါ။
ခုနကရှင်းပြတဲ့ အဆင့်ပြီးရင်တော့ မိမိသုံးနေတဲ့ Download Manager က Activated အဖြစ် ကောင်းစွာ သုံးနိုင်ပါပြီ။ Fake Serial လုံးဝမတတ်တော့ပါ။ ဒီလောက်ဆိုရင် အခုမှစလေ့လာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံး နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် Internet Download Manager V 6.18 Build9ကိုတော့ ဒီအောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Download Internet Download Manager V 6.18 Build9Final Full
Htet Aung Hlaing 12 June 2018 at 00:13
Thank you so much. It's very useful for everyone.
ylh 19 November 2018 at 08:28